Archive du 20170803
Ravalomanana tany Ankaramalaza “Tsy anjarantsika ny mitsara”
76 taona izay no nijoroan’ny toby FLM any Ankaramalaza, izay niorina ny taona 1941. Mivelatra amina velaran-tany 18Ha. Miisa 5000 ny mponina, fa tafakatra 2 5000 izany rehefa fotoam-panokanana lehibe, toy ny omaly.
Fampielezan-kevitra “Tsy mihoatra ny 100 miliara ariary ny vola ampiasaina”
Singa goavana mampitovy hevitra ny CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) sy ireo mpisehatra samihafa toy ireo mpanao politika sy ny firaisamonim-pirenena ny fanatsarana ny lalàm-pifidianana.
Kongresim-paritry ny TIM Tanterahina any Manakara anio
Tanterahina anio 3 aogositra ao Manakara ny Kongresim-paritra ny Antoko Tiako I Madagasikara ho an’ny faritra Atsimo Atsinanana sy Vatovavy Fitovinany.
Praiminisitra Solonandrasana Nanondrana indray…
Samy manana ny fihetsiny sy toetrany mety tsy ho ampoizina ny mpitondra fanjakana na tompon’andraikitra ambony na any ivelany na eto amintsika, ary maro no manaraka akaiky sy liana amin’izy ireny.
Hetra alaina amin’ny « pylône » Amin’ny 15 oktobra ny fara-fandoavana azy
Ho fampiharana ny lalàna 2014 /020 ny volana aogositra 2014 sy ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 2017,
Famoahana sary mampivarahontsana Nampitandrina ny minisitry ny serasera
Taorian’ny fanambarana ofisialy navoaky ny ministera ny alatsinainy lasa teo dia mbola nampatsiahy indray omaly alarobia ny minisitry ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrimpanjakana Harry Laurent Rahajason fa tsy fanao ny mamoaka sary mamoafady na mampivarahontsana amin’ny fahitalavitra sy ny gazety an-tsoratra
Mediatioran’ny Repoblika Tsy mahafantatra lalàna ny Malagasy
Tsy manan-jo hiditra amin’ny sehatry ny fitsarana ny Mediatioran’ny Repoblika. Tranga tena mandalo matetika ao amin’io rafi-panjakana io hatreto ny fitarainana amin’ny tsy fahazoan’ny olona ny dika mitovy fanatanterahana ny didim-pitsarana na ny « grosse»,
Hafahafa! Izay no azo amehezana ny zava-niseho nifanesisesy teto amin’ny firenena tato ho ato.
Faritra Atsinanana Mety tsara ny fiompiana trondro
Raha tena mampitaraina ny maro tokoa hatramin’izao ny fidangan’ny vidin’ny trondro eto an-drenivohitra dia mifanohitra amin’izay tanteraka ireo karazan-trondro avy any amin’ny faritra Atsinanana, indrindra fa ny tilapia.
FARMSHOP Manofana maimaim-poana ny mpiompy
Orinasa mpaninjaran’ ny Avitech sy ny LFL ny Farmshop. Mivarotra provandy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena izy ireo ao anatin’izany no sady mivarotra akohokely vao fohy iray andro ihany koa.
CMR PARAMED Hankalaza ny herintaona nijoroany
Feno herin-taona sahady ny « Cercle Mixte de Reflexion pour la révalorisation de formation paramedicale » eto Madagasikara na ny CMR Paramed tarihin’ny filohany Razanadrakoto Roland Albert.
Fifaninanan-kira karakarain’ny AFT Amin’ny 02 septambra ny fifanintsanana voalohany
Hotontosaina ny 02 septambra ho avy izao ny fifanintsanana voalohany amin’ilay fifaninanan-kira amin’ny fiteny Frantsay, karakarain’ny AFT etsy Andavamamba.
Polisim-pirenena miady amin’ny kolikoly Mitohy hatrany ny ezaka
Anisan’ny ivon-toerana iray voasokajy ho be kolikoly tokoa teo aloha teo ny eny anivon’ny pôlisim-pirenena. Anisan’ny antony nananganana ny “Inspection generale de la police nationale de Madagascar” izany efa ho telo taona izao,